पृथ्वीको स्वास्थ्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
अरिलिएसको शासनकालमा महामारी फैलिएको थियो । रोमन साम्राज्यलाई १५ वर्षसम्म थिलथिलो पारेको एन्टोनिन प्लेग भनी चिनिएको त्यो महामारीमा पचास लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला दास, बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धा धेरै मरे ।
वैशाख २७, २०७७ रोशन शेरचन
महाव्याधिकाे उद्‍भव - कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको कहरबीच मार्च २०२० मा डब्लूडब्लूएफले ‘प्रकृतिको क्षय र महाव्याधिको उद्भव’ (द लस अफ नेचर एन्ड राइज अफ पानडेमिक) शीर्षकको एक रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो । रिपोर्टमा कोभिड–१९ को उद्गम स्रोत, त्यसको विस्तार र माध्यमबारे पछिल्ला वैज्ञानिक तथ्य छन् र तथ्यको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रकृतिको क्षयसँगै विगत र हालका दिनमा देखिएको महाव्याधिका उद्भवको कार्यकारण सम्बन्धको व्याख्या गरिएको छ । डब्लूडब्लूएफ प्रकृति संरक्षण, वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण र वन्यजन्तुको चोरी सिकार नियन्त्रणमा दशकौंदेखि समर्पित विश्वव्यापी संस्था भएकाले पनि रिपोर्टको महत्त्व बढेको छ । यस लेखको पहिलो परिच्छेद यही रिपोर्टमा आधारित छ ।
कोरोना भाइरसको परिवार ठूलो छ । यो महामारी यसअघि पनि नदेखिएको होइन । जसमध्ये युरोपमा देखिएको श्वासप्रश्वास महामारी मेर्स (सन् २०१२ मा साउदी अरबमा पहिलोपटक देखिएको) र सन् २००२ मा दशिण चीनको गुवानडोन प्रान्तको सार्स प्रमुख छ । हाल त्राहिमाम मच्चाएको भाइरस कोरोना परिवारकै भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई कोभिड २०१९ (को– कोरोना, भी– भाइरस, डी– डिजिज र १९, सन् २०१९ मा पहिलापटक पहिचान भएकाले) नामकरण गरेको छ । यसको कम प्रचलित अर्को नाम पनि छ । भाइरसको नामकरण गर्ने विश्वव्यापी संस्थाले (इन्टरनेसनल कमिटी अफ टेक्सोनोमी अफ भाइरसेस) दिएको नाम ः सार्स कोभ–२ । सार्स भाइरसको जिनसँग धेरै मिल्ने भएकाले यसलाई सोर्स कोभ–२ नाम दिइएको छ । तर, यी दुईबीच खास भिन्नता छ । सार्स कोभ–२ (कोभिड–१९) बाट हुने मृत्युदर सार्सको तुलनामा कम तर संक्रमण दर अधिक छ ।
वैज्ञानिक समुदायमा चुनौती बनेको प्रश्न छ, यो भाइरस वुहानमा कहाँबाट, कुन माध्यम हुँदै आयो ? डिसेम्बर २०१९ मा चीनको वुहानबाट फैलिएको उक्त भाइरसको उद्भव केन्द्र र माध्यमका बारेमा वैज्ञानिक र अनुसन्धान गर्ने केन्द्रका आफ्नै तर्क, विश्लेषण र अनुमान छन् । भाइरस अर्को जीवमा (विभिन्न वन्यजन्तु वा मान्छे) प्रवेश गरेपछि त्यसले आश्रय दिने जीवको (होस्ट) शरीरमा भएका भाइरससँग अन्तरक्रिया गरी फेरिन्छ र भिन्न संरचनाको बन्छ । कतिपय अवस्थामा त नयाँ भाइरसको प्रजातिको रूपमा उद्भव हुने वैज्ञानिक तथ्य छ । त्यसै कारण भाइरसको स्रोत (उद्गम केन्द्र) मात्र थाहा पाएर हुँदैन, त्यसका बीचमा रहेका होस्टहरू पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।
रोमको बायोमेडिको अध्ययन केन्द्रको नतिजामा, यो भाइरस चीनको बजारमा बेचिएको चमेराबाट फैलिएको हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अन्य अनुसन्धानले पनि कोभिड–१९ र युनान प्रान्तमा भेटिएको चमेरोको जिनको संरचनामा धेरै समानता देखिएकाले त्यसको सम्भावनातिर संकेत गरेका छन् । असमानताहरू भने कोभिड–१९ मान्छेमा प्रवेश गर्नुअगावै अन्य होस्टको प्रणालीको कारण हुन सक्ने औंल्याएका छन् । केही समानता मलायान सालकसँग पनि भेटिएका छन् । खपटाको निम्ति सालकको चोरी–सिकारी गरिन्छ र परम्परात औषधिको रूपमा त्यसको प्रयोग हुन्छ । सालकको मासु एसियन र अफ्रिकी समुदायमा विशेष रुचाइन्छ । दुर्लभ जनावर भएकाले सन् २०१६ मा सालकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर त्यसको गैरकानुनी चोरी–सिकारी र व्यापार कायमै छ ।
विभिन्न तथ्य र अनुमान अघि सारिए पनि कोभिड–१९ कहाँबाट र कुन माध्यम हुँदै फैलियो त्यसको सबुत प्रमाणसहित कसैले भन्न सकेका छैनन् । यसमा थप अनुसन्धान हुँदै छ । तर, यो नयाँ भाइरस विश्व बजारमा वन्यजन्तुको बेचबिखन, ओसारपसार र त्यसका अंगहरूको बिक्रीसँग गाँसिएको तर्क सत्यको निकट देखिन्छ । डब्लूडब्लूएफको रिपोर्टको निष्कर्ष छ- प्रकृतिको क्षय, वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट हुनु, वन्यजन्तुको चोरी सिकारी र अवैध बिक्रीले मान्छे र वन्यजन्तुको सम्पर्क (इन्टरफेस) बढ्नु नै यस भाइरसको उद्भवको कारण हुन सक्छ । बिर्सन नहुने, विश्वस्तरमा, मान्छेले पृथ्वीको भू–सतहको तीन चौथाइ र समुद्रको दुई तिहाइ क्षेत्रफललाई नराम्ररी गिजोलिदिएको छ ।
लकडाउनको समयमा स्टोइक दर्शनबारे थोरै अध्ययन गरेँ । युट्युब हेरेँ । अडियो बुक सुनेँ । पीडीएफ पढेँ । दुई हजार वर्षभन्दा अगाडिको ग्रीक र रोमबाट फैलिएको स्टोइक दर्शन निकै रोचक र सामयिक लाग्यो । जिनो, सेनेका, इपिक्टेटस, मार्कस अरिलियसजस्ता स्टोइक दार्शनिकहरूले विकसित गरेका यो दर्शन क्रिस्चियानिटीको आगमनसँगै ओझेलमा परेको रहेछ ।
जेल जीवन बिताउँदै गरेका नेल्सन मन्डेलाको हातमा एक दिन अरिलिएसको पुस्तक ‘मेडिटेसन्स’ पर्छ । मन्डेला पुस्तकबाट प्रभावित हुन्छन् । मन्डेला विशाल हृदय र क्षमाशील नेताको रूपमा बदलिनुमा उक्त पुस्तकको पनि प्रभाव छ भनिन्छ । स्टोइक दर्शनको चार आधारभूत प्रस्तावना (व्यावहारिक विवेक, नैतिकता, साहस र मध्यमा) छन् । स्पिनोजादेखि सत्रौं शताब्दीका दार्शनिक रेने डेकार्टसम्म स्टोइक दर्शनबाट प्रभावित थिए । र्‍यासनालिस्ट परम्परा स्टोइक दर्शनबाट अघि बढेको देखिन्छ ।
अर्का स्टोइक इपिक्टेटस दास थिए तर आफ्नो विवेकको बलमा मुक्ति पाए । तत्कालीन समाजमा तोकिएको पैसा तिरी वा असाधारण विवेकले शासकलाई प्रभावित पारी दासबाट मुक्ति हुने उपाय रहेछ । इपिक्टेटसको इन्क्रिरिडियन पढे । साथै ‘मेडिटेसन्स’ को सार । डायकोटमी अफ कन्ट्रोल अर्को प्रस्तावना छ, जसमा हाम्रा सबै काम, दायित्व र आकांक्षा दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । आफ्नो नियन्त्रणभित्रको र बाहिरको । नियन्त्रणभित्रको हकमा मिहिनेत गर्ने । दोस्रोको हकमा, केही नगर्ने ।
अरिलिएसको शासनकालमा महामारी फैलिएको थियो । रोमन साम्राज्यलाई १५ वर्षसम्म थिलोथिलो पारेको एन्टोनिन प्लेग भनी चिनिएको त्यो कहर सन् १६६ देखि १६८ मा उत्कर्षमा पुग्यो । लेखक डोनाल्ड रोबर्टसन लेख्छन्, त्यो महामारीमा करिब पचास लाख मानिस मरेका थिए भने तीन चौथाई जनसंख्या संक्रमित भए । दास, बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धा धेरै मरे । अन्धविश्वासमा जकडिएको समाज र चिकित्सा विज्ञान विकसित नहुँदाको अवस्थामा धैर्य र होस नगुमाएर अरिलिएसले कसरी महामारीको सामना गरे, त्यो स्टोइक विचारले नै सम्भव भएको बुझ्न सकिन्छ ।
स्टोइक थिममा, हलिउडका केही सिनेमाहरू (ग्लाडिएटर, ससहान्क रेडेम्पसन, मारसियन आदि) चर्चित छन् । यी सिनेमाले नैतिक मूल्यको पक्षमा पात्रले गरेका संघर्ष र आशावादिताको कथा भन्छ । जीवनका अत्यावश्यक गुणहरूको महत्त्व दर्साउँछ । मृत्युचिन्तन स्टोइकको सधैँ केन्द्रमा छ । मार्क्स अरिलिएस रोमका राजा थिए । प्लेटोको शब्दमा, फिलसफर किङ । तर, उनी कहिल्यै सत्ताको मात र विलासितामा भुलेनन् जसरी निरो, कालिगुला डुबेका थिए ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वका कतिपय देशमा भएको लकडाउन र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले पृथ्वीले विश्राम पाएको छ । द्रुत गतिमा अज्ञाततिर हान्निँदै गएको यो गोलाका (स्पिनिङ बल) जमिन, समुद्र, वनजंगल, प्राकृतिक स्रोत र खनिज लवणको मान्छेले अधिक उत्खनन, नष्ट र उपभोग गर्‍यो । मानिसका महत्त्वाकांक्षाले नचिथोरेको कुनै ठाउँ बाँकी छैन । अमेजनको जंगल, तिब्बती पठार, खाडीको मरुभूमिदेखि सबै समुद्र र अन्टार्कटिकमा समेत मानिसले चिथोरेको दाग देख्न सकिन्छ ।
अत्यधिक जनसंख्या र बढ्दो उपभोग नै महामारीको जरा कारण हो । बढ्दो जनसंख्याले माग गर्ने खाद्यान्न, ऊर्जा, पारवहनले पर्यावरणीय क्षति बढिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत काटेको छ, ढालेको छ, उत्खनन गरेको छ, लडाएको छ, ओसारपसार गरेको छ, प्रशोधन गरेको छ, बेचेको छ, उपभोग गरेको छ । फलस्वरूप पर्यावरणहरूले आफ्नो नैसर्गिक लयमा फर्कने क्षमता (रिजेनेरेटिभ क्यापासिटी) गुमाउँदै गएको छ, जसलाई नवउदारवादी राजनीतिक विचारधाराले मलजल गरेको छ । त्यो संकट जलवायु परिवर्तन र यस्ता महाव्याधिमार्फत प्रस्फुटित भइरहेको छ ।
प्रसिद्ध जीवशास्त्री एडवर्ड व विल्सनले प्रकृति र पर्यावरणमाथि मान्छेको ज्यादती बढ्दै गएपछि यौटा अवधारणा अघि सारेका छन् । प्रत्येक देशले आफ्नो भू–सतह र जलाशयको आधा क्षेत्रफल प्राकृतिक स्थितिमै छाड्ने । ‘आधा पृथ्वी : जीवनका निम्ति हाम्रो उपग्रहको लडाइँ’ (हाफ अर्थ : आवर प्लानेट्स फाइट फर लाइफ) पुस्तकमा त्यस अभियानको औचित्य, उद्देश्य र रणनीतिबारे विस्तृतमा लेखिएको छ ।
काठमाडौंको आकाश हाल सफा र नीलो देखिएको छ । चराचुरुंगीको चिरबिर धेरै सुनिन थालेको छ । प्रकृति र पर्यावरणमा दबाब (स्ट्रेस) घटेको छ । सम्पूर्ण मानव जातिका निम्ति महाव्याधि दुःखद घटना भए पनि पृथ्वीको स्वास्थ्यका निम्ति यो सुखद छ । छोटै अवधिका निम्ति भए पनि हाम्रो साझा घरले पुनरुत्थानको मौका पाएको छ ।
कोरोना भाइरसको समस्या समाधानपछि, विश्व स्वास्थ्य संगठन वा राष्ट्र संघको नेतृत्वमा वर्षको कम्तीमा एक साता सबै देशले पृथ्वीको स्वास्थ्यका निम्ति (त्यसैले मानव जातिका निम्ति पनि) लकडाउनको अभ्यास थाल्ने हो भने पृथ्वीको आरोग्यता बढ्ने थियो । कोभिड–१९ भोगेको पुस्ताको तर्फबाट हाम्रा सन्ततिलाई स्वस्थ पृथ्वी सुन्दर उपहार बन्ने थियो ।
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ ११:१०
‘देउपितृ खुसी छन्’
झाँक्रीले अन्तिम दिन जोखाना हेरेर भनेको सम्झेँ– भेडा, कुखुराको भित्री अंग हेर्दा, सपनीमा आएको बिचार्दा कुलपूजा राम्रोसँग सम्पन्न भएकोमा देउपितृ खुसी छन्, देउपितृ हाँसेका छन् । झाँक्रीले नै देउपितृ खुसी छन् भनेपछि सन्तति स्वाभाविक रुपमा प्रसन्न हुँदा रहेछन् । मानव जाति यस्तै सामूहिक मनोविज्ञान अडेसो समाएरै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ ।
फाल्गुन १०, २०७६ रोशन शेरचन
काठमाडौँ — झाँक्री विधाबाट कुलपूजामेरा पुर्खा प्रकृतिपूजक हुन् भन्ने अनुमान थियो तर यस पाटोतिर खासै पसेको थिइनँ । म आफूलाई बौद्वमार्गी भनी चिनाउँथेँ । कहिलेकाहीँ बोन हुँ कि भन्ने भाव आउँथ्यो । मुवा, पत्नी हिन्दु धर्म पनि मान्ने भएकाले त्यसप्रति मेरो सम्मानभाव थियो नै ।
कर्मकाण्डप्रति भने आलोचनात्मक हुने प्रयास गर्थें । यस्तै पृष्ठभूमिमा यही मंसिर अन्तिम साताको मुस्ताङ भ्रमणले आफ्नो परम्परालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर दिलायो ।
झन्डै १९ बर्षपछि हुन थालेको कुलपूजाको निम्ति गंगबु बसपार्कवाट रात्रि बस समातेँ । थकाली झाँक्रीसँग साइत हेरेर मिति जुराइएको थियो । मंसिर २४ मा थालेर २५ मा सकिने कुलपूजा मेरालागि कौतुकमय विषय थियो । झाँक्रीको सन्तान भए पनि त्यसले मेरो भौतिक जीवनमा केही प्रभाव पारेको थिएन । सुदूर मुस्ताङको झाँक्री परम्पराको रहस्यमयी बतास विगतको भैरहवा, पोखरा र वर्तमानको काठमाडौंसम्म कहिल्यै आइपुगेन ।
यात्रामा मसंँग बहिनी सलमा शेरचन पनि थिइन् । लामै अन्तरालमा आफ्नो गाउँको यात्रामा पुलकित थिइन् । बसमै अशोक गौचन दाइ भेटिए । उहाँ पूजाकै निम्ति मुस्ताङ जाँदै रहेछन् ।
पोखरा पुग्दा झमक्कै रात परेको थियो । बुद्धचोकबाट सन्तोष शेरचन पनि त्यही बस चढे । कस्तो संयोग ! कुलपूजा सन्तोषकै घरमा हुँदै थियो । उनका बुबा र मेरो बुबा, दुई भाइ । सन्तोषको बुबा दाइ । मेरो बुबा विसं ०२६/०२७ सालमा मुस्ताङबाट बसाइ झरेपछि कुलघर सन्तोषको घर बन्यो । अन्यथा प्रचलनले कान्छा भाइको घर कुलघर हुन्छ । कारण बुबा–आमा कान्छो छोरासँग बस्छन् । झाँक्री पूर्वको ढ्याङ्ग्रो, पित्तलका भाँडा, शालीग्राम र समग पूजा सामग्री सन्तोषकै घरमा राखिएको थियो । तीन–चार बजे राति कोबाङस्थित कालीगण्डकी बगरमा बसले ओरालेपछि टर्च बाल्दै घर पुग्यौं ।
अर्को बिहान, डाँडामाथि सूर्य चढ्दै गएपछि, कोबाङ गाउँ पनि दृष्टिमा चढ्दै गयो । साँझ झाँक्री पनि आइपुगे । मेरो बुबा, मुवा, भाइ दुई साताअघि नै गाउँ पुगिसकेका थिए । मुवाले बहिनीहरूसँग मिलेर घरको सरसफाइ, लिपपोत गरिसकेकी थिइन् । जाँड बनाउन भात र मर्चा हालिसकेकी थिइन् । सन्तोषले मलाई भित्री कोठा देखायो । साँघुरो त्यो कोठामा चामल राख्ने माटाले लिपेका आठ दस घैंटा थिए । पश्चिम भित्ताछेउ काठका दुईटा मदुस देखिन्थ्यो । बलिया न बलिया लाग्ने, कालै भइसकेका । सन्तोषले एउटा मदुस खोल्यो, त्यहाँ देउता र पूजासामग्री राखिएका थिए । त्यसको ढक्कन खोल्दा अनौठो गन्ध कोठाभरि फैलियो । जालो लागिसकेको, धूलोको मोटो परत जमेको, मिनिएचर खण्डहर सादृश्य थियो मदुस । त्यसभित्रबाट पित्तलको चारवटा कलश, धुपी र सल्लाका सुकेका हाँगा, दर्जनौं शालिग्राम, चराको आकृति भएको धातुजडित लौरो, हाडखोर, अक्षता, पुराना सिक्का र नोट, सानो फलामे त्रिशूल, चुप्पी, तरबार निस्किए । सन्तोष र मैले पालैपालो ती सामग्री झिकेर डेक्चीमा राख्दै, मनतातो पानीले पखालेर, शालिग्राम र हतियारको हकमा तोरीको तेलले घसेर चोखो स्थानमा राख्यौं । भाइ उज्ज्वल, गौतम र उत्तमले सघायो ।
कुलपूजा अर्थात् पूर्वजले थालेको पूजा । कति पुस्ता अघिसम्म कुलपूजा तन्किन्छ, थाहै छैन । तर, मेरा बाजे पुर्खा नन्दबहादुर शेरचन उहिल्यै थाक सात सय क्षेत्रमै कहलिएका झाँक्री थिए रे । अधिकांश सामग्री सायद उनैले जुटाएका हुन् । सात सय कुरिया भएकाले सात सय क्षेत्र भनिएको रहेछ । नन्दबहादुर बाजेको नाम मात्र सुनेथेँ । देउता र पूजा सामग्री सफा गर्दा बाजे हाम्रै अघिल्तिर उभिइरहेका छन्झैं लाग्ने । मैले धेरै तादात्म्य भाव देखाएकाले सायद त्यस्तो भयो । मान्छे इमोसनल क्रियचर पनि हो, थाहा थियो । बेस्सरी अनुभव गरेँ । थाक सात सयकै कुलपूजा र अन्य कर्ममा उनी नै डाकिन्थे रे । कालीगण्डकीपारि सौरु गाउँतिर कोही दुःखबिमार भएर फाकफुक गर्न जानुपर्दा वर्षामासमा कालीगण्डकीको पानी टेकेर पुग्थे रे । लख काट्न सकिन्थ्यो— उनी नामूद झाँक्री थिए । किंवदन्तीहरू साधारण र सामान्य व्यक्तिमाथि कहाँ बनेको छ र ?
हाम्रो सन्तानमा कसैले झाँक्री विधालाई निरन्तरता दिएनन् । खासमा कान्छा छोराले त्यस अर्थमा मेरो बुबाले नै निरन्तरता दिन पर्ने प्रचलन हो । बुबाले युवा उमेरमा उक्त विधा सिकेका पनि रहेछन् । गुरु झाँक्रीलाई एकाध कर्मकाण्डमा सघाएका पनि रहेछन् । ‘तर २००७ सालको जागरणले हामीलाई पनि छोयो । तसर्थ पढ्नुपर्छ भनेर बनारसतिर हिँडेँ’, बुबाले बताउनुभयो ।
बनारसबाट फर्किएपछि छत्र मास्टर थकाली र बुबाहरू मिली जोमसोमको स्कुल स्थापना गरेका थिए । प्रारम्भिक वर्षहरू जोमसोमै पढाए पनि । एकाध बाजेहरूले भने झाँक्री परम्परा थामेको देखिन्छ । तर, उपल्लो तहको झाँक्रीमा नन्दबहादुरकै नाम आउँछ । आफ्नो सन्ततिमा कसैले इच्छा राखे सपनामा आई मन्त्र फुकेर भए पनि झाँक्री विधा सिकाउँछु भनेका थिए रे !
थकाली समुदायमा ज्वाइँ हुन सजिलो छैन । मर्दा–पर्दा, विवाह कर्ममा ज्वाइँ नभई कामै सर्दैन । यता गर ज्वाइँ, उता गर ज्वाइँ । एक जना ज्वाइँ काठमाडौंबाटै सँगै थिए । अर्को ज्वाइँ मुस्ताङमै व्यवस्था भए । थमसेल भनिने विधिप्रक्रियाबाट अर्को दिन कुलपूजा सुरु भयो । झाँक्री श्रुति–परम्परामा आधारित विधा रहेछ । शिष्य नभए, विधा लोपै हुने । झाँक्री नवीन युवा थिए । थकाली सेवा समितिले परम्पराको जगेर्ना गर्न तालिमको व्यवस्था गरेकोले उनी झाँक्री परम्पराको पछिल्ला कडी थिए । उहिल्यै पूर्वज म्याग्दीमा सरेकाले मुस्ताङलाई पुर्खाभूमि मानेर नतमस्तक हुन्थे । नन्दबहादुरकै घरमा आई उनकै देउता र पूजासामग्री अघि राखी कुलपूजा गर्न पाउनुलाई अहोभाग्य मानेको थिएँ ।
पहिलो दिन, भेडाको भोग दिँदा रहेछन् । भेडा पनि सेतो, दाग कतै नलागेको, स्वस्थ हुनुपर्ने । भोग दिने भएकाले पूर्वज प्रकृति पूजक रहेछन् । बसाइसराइको क्रममा वा अहिंसा र करुणाको दर्शनबाट प्रभावित भएर बौद्धमार्गी हुने धेरै थकाली छन् तर परम्परा अर्कै रहेछ । मन्त्रोच्चारण गरीवरी, सबै परिवार, ज्वाइँहरूले गिलासको रक्सीमा धुपीको पातले चोपल्दै, झाँक्रीको पछि थेमो थेमो... उच्चारण गर्दै रक्सी छर्कन्थ्यौं । सबै पूर्वजको नाम लिँदै उनीहरूलाई रक्सी, जाँड, चुरोट र स्वादिला खाने कुरा चढाउने चलन रहेछ ।
धुपी र दियालो जलेर वातावरणमा सुगन्ध व्याप्त छ । काठको सिन्कामा धुपी, सल्ला र राता काला ध्वजा टाँगिएका छन् । सानो अग्निकुण्डबाट चरुको बास्ना र धूवाँको कुइरीमण्डलीबीच सबैले क्रमशः भेडामाथि पानी छर्क्यौं । पर्सिए मात्र त्यो भेडा भोग दिन योग्य मानिँदो रहेछ । लामो समय लिएर भेडा पर्सिइयो । मंसिरको जाडोमा, निथ्रुक्क भिजेको भेडासँग मन पनि भिज्दै गयो । सानो छँदा कसैले कुखुरा मारे रुने म, त्यो स्वाभाविक थियो । शताब्दियौंदेखि चलिआएको मार्ने तरिका अनौठो लाग्यो । छातीमा चुप्पी घोप्ने, चिर्ने र मुटु थुत्ने ! मन बिथोलिँदै थियो तर तर्कले भन्न थाल्यो— सयौं वर्षअघि पूर्वजको सबैभन्दा ठूलो लडाइँ नै प्रकृति र जंगली जनावरसँग थियो । त्यसैको सिम्बोल थियो त्यो ।
बिजुलीबिना जंगलछेउ बस्नुपर्ने भएकाले हिंस्रक वन्यजन्तुको भय सधैँ थियो । त्यस्तोमा जनावरको मानवीय स्वरूपको कल्पना सम्भव थिएन । शत्रु भएपछि जनावरलाई मार्ने नै ध्येय हुन्छ । त्यस्तै प्रकृतिप्रदत्त हिमपात, हावाहुरी, भेलबाढी, खग्रास ग्रहण आदिले पनि मान्छेलाई जति दुःख दिएका थिए, उति रनभुल्लमा पारेका थिए । प्रकृतिजन्य अनेकन विपत्तिहरूको वैज्ञानिक कारण थाहा नभएको बेला प्रकृतिलाई मनाएर हुन्छ कि, भोग चढाएर हुन्छ, मान्छेले आफ्नो समुदायलाई ढाडस दिँदै, आश्वस्त पार्दै आएका हुँदा हुन् । त्यही परम्परा त्यही स्वरूपमा अहिलेको समयसम्म आउँदा आश्चर्य लाग्ने नै भयो । भेडा मार्दा भाइ र बहिनी बाहिरिए । मचाहिँ भित्रै बसेँ । तर, नजर फेरेँ । त्यस क्षणलाई अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने भावना बलियो थियो । यता भेडा पीडाले चिच्याउन थाल्यो, उता वातावरण रहस्यमयी बन्दै गयो ।
झाँक्रीले कसैले नदेख्ने गरी कालीगण्डकीको चोखो पानीले पूजा सामग्री पखाल्नु र जल ल्याउन भनेका थिए । बिहानै ३ बजे कालीगण्डकी जाने सल्लाह भयो । कालीगण्डकीे सबैभन्दा फराकिलो भएर बग्ने गाउँ सायद कोवाङ लार्जुङ नै होला । अर्को टुकुचे । मार्फामा कालीगण्डकी थोरै साँघुरिन्छ । जोमसोममा त झन् साँघुरिएको छ । त्यसकै किनारमा एयरपोर्टको रनवे बनेको छ ।
केही दिनयता घाम शिथिल थियो । चिसोले कालीगण्डकी उपत्यका कब्जा गरेको थियो । ३ बजे घरबाट निस्कियौं । सन्तोष, उज्ज्वल, उत्तम, अशोक दाइ र म टर्च बालेर कालीगण्डकीतर्फ अघि बढ्यौं । त्यो निस्पट्ट अन्धकारमा कोही सुतेका छैन भने कालीगण्डकी र हामी मात्रै । काठमाडौंबाट हिँड्दा कुलपूजामा उपस्थित हुनेजस्तो मात्र सोचेथेँ । तर, यहा त भिड्नु नै पर्ने रहेछ ।
करिब २० मिनेट हिँडेपछि कालीगण्डकीको पिलन्धरे भंगालो पार गरेर अलि ठूलो भंगालाछेउ रोकियौं । क्रमशः चारवटा पित्तलका भाँडा र पूजा सामग्रीलाई चोखो पानीले पखाल्यौं । चोखो जल भर्‍यौं । छोइनसक्नुको ठिहिराउने चिसो थियो पानी तर भावनात्मक बल कैयन गुणा तातो थियो । थेमो थेमो... गरेर निविड अँध्यारोमा पुर्खालाई सम्झनु धेरै भावुक बनाउने कर्म रहेछ । खोला, नदी र समग्रमा पानी किन संस्कृति हो भन्ने विषय थप प्रस्ट हुँदै गयो । सानैदेखि भैरहवा, पोखरा र अहिले काठमाडौंमा बसोबास गरेको, मुस्ताङमा घुम्न र जागिरको दौरानमा मात्रै पुगेकाले त्यो पाटो छुटेछ । आफ्ना रुटलाई थोरै भए पनि खोतलेँ यसपालि । पुर्खा पितृहरूका निम्ति गरिने भएकाले यसै भावनात्मक भइने, झाँक्रीको दर्बिलो स्वर र रौद्र स्वरूप, मन्त्रोच्चारणले मनोदशालाई तरंगित गरिरहने, अतियथार्थिक अनुभव भयो ।
दोस्रो दिन सबै गाउँलेलाई खाना खान सामुदायिक भवनमा आमन्त्रण गरिएको थियो । झाँक्रीको निर्देशनअनुसार थेमो गर्ने, चामल छर्कने, पूजा सामग्री पखाल्ने, चोखो ठाउँमा सार्ने, ध्वजालाई स्याउको बोटमा चारै दिशा अक्षता छर्कंदै सिमेभुमेबाट रक्षा गर्ने, सबैको मंगल हुने र केही बिराम भए क्षमा गर्न भन्दै ध्वजा बाँध्यौं, सन्तोष र मैले । रातो भालेको पनि भोग दिइएको थियो । वास्तवमा कोबाङमा कुलपूजा छत (थकाली भाषामा थारा) मा गर्ने चलन रहेछ । छत समथर र कमेरो माटो खाँदेर बनाइएको हुनाले बिस्कुन सुकाउन, अन्न झाड्न र पूजा गर्न उपयुक्त छ । तर, यो कुलपूजा कोठाभित्र गरिएको थियो । झाँक्रीका अनुसार, यस परम्परामा गुरुबाट जे–जस्तो सिकिन्छ, त्यही गरिन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न । झाँक्री विनम्र र व्यावहारिक थिए ।
भेडाको मासुझोलसँग भात, ससेज (थकाली भाषा काढुङ) खायौं । सबै ज्वाइँ र माइतीलाई बिदा गरियो, आशिष थाप्यौं । लामो अन्तरालमा कुलपूजा सम्पन्न भएकोमा एउटा राम्रो काम भयो भन्ने सबैको मनमा परेको थियो ।
हिँड्ने बेला भारी हिमपात भयो । जोमसोमबाट बस नछुट्ला कि शंका थियो । तैपनि खन्तीको बगरमा बस कुरेँ । सम्पूर्ण ल्यान्डस्केप सेताम्मे देखिएको थियो । दिउँसोको साढे बाह्र बजे बस आइपुग्यो । करिब डेढ घण्टा घट्टेखोलाको पुलमा हिउँमा चढ्न नसकेर गाडी रोकियो । बल्लबल्ल उक्ल्यो । लेतेनेर कालीगण्डकी बगर जमेको हिमतालजस्तो देखिन्थ्यो । त्यहाँ पनि गाडी उक्लन गाह्रै पर्‍यो । बेलुकीसम्म जसै पोखरा पुग्नु छ । लेतेको चढाइ कटेपछि भने गाडीले गति समात्यो ।
सेताम्मे धौलागिरि नीलगिरि ल्यान्डस्केपमा गाडी गुडिरहेको थियो । मेरो मनमा धेरै कुरा खेलिरहेका थिए । यसपालि आफ्ना पुर्खाको विश्वासपद्धति र परम्परालाई नजिकबाट अनुभव गर्न पाएकोमा भिन्न अनुभव गर्दै थिएँ । झाँक्रीले अन्तिम दिन जोखना हेरेर भनेको सम्झेँ— भेडा, कुखुराको भित्री अंग हेर्दा, सपनीमा आएको पनि विचार्दा देउपितृहरू कुलपूजा राम्रोसँग सम्पन्न भएकोमा खुसी छन्, देउपितृहरू हाँसेका छन् । थेमो थेमो... उच्चारण गर्दै भावविह्वल बन्यौं । सबै प्रसन्न भयौं । मुवा धेरै खुसी हुनुभएको थियो । धेरै अन्तराल बितेकाले कुलपूजा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्नेमा मुवा नै प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । परिवारका सबै सदस्यले सहभागी जनाउँदै साथ दिए । झाँक्रीले नै देउपितृ खुसी छन् भनेपछि सन्ततिहरू स्वाभाविक रूपमा प्रसन्न हुँदा रहेछन् । मानव जाति यस्तै सामूहिक मनोविज्ञान अडेसो समाएरै यहाँसम्म आइपुगेको रहेछ । हिमदृश्य पनि बससँगै गुडिरहेको थियो । घाँसामा हिउँ देखिन छाडेपछि भने लाग्यो, अब पूर्वजभूमि छाडिएको छ ।
हिउँमा लेखेर आएका छौं
हामीले आ–आफ्ना नामहरू
एकै छिनपछि घाम लाग्यो भने
रहने छैनन् हाम्रा नामहरू
एकै छिनपछि हिउँ थपियो भने
पनि रहने छैनन् हाम्रा नामहरू
हामी हुँदै नरहने हाम्रा नामहरू,
हामी नै नभएपछि कसरी रहलान् हाम्रा नामहरू
– तीर्थ श्रेष्ठ
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १०:५२